(Hadhwanaagnews) Monday, April 16, 2018 13:15:59
Haddii uu aadamigu sidaa wax u qiimeeyo in uu indha-ku-garaadle yahay ayaa markaaba loo qaadanayaa. Qoraa la yidhaahdo Rional Ruby ayaa buug
Haddii uu aadamigu sidaa wax u qiimeeyo in uu indha-ku-garaadle yahay ayaa
markaaba loo qaadanayaa. Qoraa la yidhaahdo Rional Ruby ayaa buug uu qoray oo la yidhaa“The Art of Making Sense” ku soo qaatay aragti uu ka soo xigtay nin Filasoof ahaa oo qarnigii 17-aad noolaa. Aragtidaasi waxa ay sheegaysaa in uu dadku garashada ka siman yahay oo uu qof kastaaba garasho fiican leeyahay. Xagga aqoonta iyo shahaadooyinka in lagaga horreeyo qofku waa uu oggolaan karaa. Laakiin arrimaha nolosha la xidhiidha fahamkooda in lagaga fiican yahay oo uu ku liito qofna aqbali maayo. Sababtu waa in uu qof kastaaba qabo, sida uu qoraagu sheegayo, in uu garasho fiican leeyahay.